१० औं पटक संविधान भत्काउने कम्युनिष्टहरुलाई जनताले किन भोट दिने?: कांग्रेस नेता लेखक - आभाषकुन्ज
गृहपृष्ठमुख्य समाचार१० औं पटक संविधान भत्काउने कम्युनिष्टहरुलाई जनताले किन भोट दिने?: कांग्रेस नेता...
१० औं पटक संविधान भत्काउने कम्युनिष्टहरुलाई जनताले किन भोट दिने?: कांग्रेस नेता लेखक
महेन्द्रनगर । पूर्व मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले आसन्न निर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेदवारहरुलाई मतदान गर्नका लागि अपिल गरेका छन् । कञ्चनपुरका सबै पालिकाका मेयर/उपमेयर, वडाध्यक्ष र वडासदस्यका उम्मेदवारहरुलाई विजयी गराउने उनले अपिल गरेका हुन् ।
यहि बैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचनकालागि नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारहरु घरदैलो अभियानमा छन् । उक्त घरदैलो अभियानलाई सम्बोधन गर्दै नेता लेखकले कांग्रेसका उम्मेदवारहरुलाई जिताउन अपिल गर्दै आएका छन् ।
भीमदत्तका विभिन्न वडाका टोलहरुमा चल्दै आएको चुनावी घरदैलो कार्यक्रमलाई कांग्रेस नेता लेखकले सम्बोधन गर्दै आएका छन् । जनताले २०७४ को निर्वाचनमा दुई तिहाई मत दिएर जिताएका उनका जनप्रतिनिधिहरुले विकासका नाममा सिन्को समेत नभाचेको, भ्रष्ट्रचारमा लिप्त भएको, आफ्ना नातागोता र कार्यक्रता मात्रै पास्ने गरेकोले यो स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारहरुलाई मतदान गर्नहुन उनले अपिल गर्दै आएका छन् ।
नेता लेखकले के–के भने, उनकै भाषमाः
२०७४ को निर्वाचनमा त्यतिबेलाको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले सयुक्त गठबन्धन गरेर उहाँहरुले निर्वाचनमा भाग लिनुभयो । सिटको तालमेल गर्नु भयो, र उहाँहरु देशभरीबाट झण्डै दुई तिहाई लिएर चुनाव जित्नु भयो । चुनाव जितिसकेपछि उहाहरुले त्यो गठबन्धनलाई एउटै पार्टी बनाउने क्रममा जानु भो र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निमार्ण गर्नु भयो ।
जो पार्टीमा प्रतिनिधि सभामा ६४ प्रतिशत भन्दा बढी मत थियो । अघिल्लो निर्वाचनमा उहाँहरुले दुई ओटा एजेण्डामा निर्वाचन लडुनु भयो जनताका माझामा, एक नम्बर एजेण्डा हामी गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्दै छौं । भोली हामी एउटै पार्टी बनाउछौं, हाम्रो पहिलो काम भनेको यो देशमा स्थिरता दिन्छौ ।
अब पटक पटक प्रतिनिधि सभा विघटन हुँने, पटक पटक सरकार परिवर्तन हुँने, देशमा अस्थिरताको एउटा श्रृंखलाबद्ध राजनैतिक अस्थिरताको श्रृंखला अब हुदैन, अब यो देशमा हामी पाँच वर्ष सम्म संसदलाई टिकाउछौं । पाँच वर्ष सम्म सरकारले निरन्तर काम गर्छ । त्यसकारण हामी स्थिरता दिन्छौ । हामीलाई स्थिरताका लागि भोट दिनुस भनेका थिए । र अर्को एजेण्डा उनीहरुको स्थिरता पछि हामी विकास दिन्छौ भनेका थिए । यी दुई एजेण्डाका कारण उनीहरु चुनाव जिते ।
तर साढे तिन वर्षमै उनीहरु भताभंग भए । उहाँले स्थिरता दिन सक्नु भएन । बरु मुलुकलाई आज सम्म हुँदै नभएको अस्थिरता तर्फ धकेल्नु भयो । यो साढे ती वर्षमा उहाँहरुले १० औं पटक संविधान भत्काउने काम गर्नु भएको छ । आफ्नो पार्टी भत्काउनु भयो । संविधान भत्काउनु भयो । त्यतीले पुगेन भनेर दुई/दुई पटक प्रतिनिधि सभा पनि विगठन गरेर भत्काउनु भयो ।
आज स्थिरताको नाम दिएर आपसमा गठबन्धन गरेर एउटा पार्टी बनाएका कम्युनिष्टहरु साढे तीन वर्षमा तीन टुक्रामा विभाजन भएका छन् । उहाँहरुले मुलुकलाई स्थिरता दिन सक्नु भएन् । विकासको एजेण्डामा पनि उहाँहरुले पाँच वर्ष सम्म मुलुकलाई विकास दिन सक्नुभएन् ।
कञ्चनपुर जिल्लाको मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि हिजो हामीले प्रारम्भ गरेका योजनाहरु, हिजो हामीले प्रारम्भ गरेका ठुला ठुला कामहरु, यो साढे तीन वर्षमा नेपाली कांग्रेस यो ठाउँमा हारिसकेपछि जुन काम जुन ठाउँमा पुगेको थियो त्यहि ठाँउमा रोकिएको छ । एक ईन्च पनि काम अगाडी बढेको छैन् । हामीले हिजो प्रारम्भ गरेका योजना बाहेक अरु कुनै ठुलो योजना, जनताका लागि महत्वपुर्ण हुनसक्ने ठुला नयाँ योजना प्रारम्भ भएका छैनन् ।
हामीले हिजो ‘एडिबी’ संग कुरा गरेर कञ्चनपुर जिल्लाका विभिन्न नगरपालिकामा एडिबीका योजनाहरु ल्याएर तिनै बाट अहिले सानातिना सडकहरु बनिरहेका छन् । हामीले हिजो कञ्चनपुरका विभिन्न भागहरु खासगरी उत्तरी भागहरुमा खानेपानीको व्यवस्था गर्नका लागि बनाएका बनाएका खाने पानीका योजनाहरुले आज पुर्णता पाइरहेका छन् । हिजो हामीले प्रारम्भ गरेका ठुल्ठुला सडकहरु आज पुरा हुँदै छन् । हिजो हामीले प्रारम्भ गरेका ठुला पुलका आयोनाहरु आज सम्पन्न हुँदैछन् ।
महाकालीको चारलेनको पुल होस कि गड्डाचौकी देखि लिएर महाकालीको पुल सम्म र त्यसबाट दोधारा चाँदनी सम्म जोड्ने ६ लेनको बाटो होस् । यी नेपाली कांग्रेसले प्रारम्भ गरेका योजनाहरु हुन् । यी योजनाहरु आज अगाडी बढेका छन्, ति बाहेकका अन्य कुनै नयाँ योजना छैनन् । त्यसो भएकाकारण उहाँहरु विकासका मुद्धामा पनि अगाडी बढ्न सक्नु भएन् । मुलुकको समृद्धिको मुद्धामा उहाहरु अगाडी बढ्न सक्नु भएन् ।
बरु उहाँहरुले आजसम्म हुँदै नभएको सुशासन र भ्रष्टाचारको नीति र्सिजना गर्नुभयो । कोरोनाले मान्छेहरु छट्पटाइरहेका बेला उनीहरुले स्वास्थ्यकर्मीलाई चाहिने पोशाकमा भष्ट्राचार गरे, बिरामीलाई चाहिने औषधीमा भ्रष्ट्राचार गरे, खोपमा भ्रष्ट्राचार गरे यो भन्दा अनैतिक र निकृष्ट काम के हुन सक्छ ? मुलुकलाई ध्वंसको राजनीतिमा लिएर जानेकाम कम्युनिष्टहरुबाट भयो । त्यसकारण कांग्रेसले आज बाध्यताले सरकारको नेतृत्व गर्नु परेको छ । हामी आज अत्यन्त खुसी भएर सरकारको नेतृत्व गरुला भनेर होइन्, हाम्रो पार्टीले पटक पटक भनेको छ ।
सभापति ज्यूले पटक पटक भन्नुभएको छ । जनताले मलाई अर्थात हाम्रो पार्टीलाई प्रतिपक्षमा बस्ने जनमत दिएका छन् । हामीलाई सरकार चलाउने जनमत छैन्, त्यसकारण हामी÷म सरकारको नेतृत्व गर्दिन, तपाईहरु चलाउनुस्, राम्रो संग चलाउनुस, हामी पाँच वर्ष नै प्रतिपक्षको नेतृत्व गर्छौ । तर उनीहरुको फुटको राजनीतिले, अस्थिरताको राजनीतिले, कुशासनको राजनीतिले, भ्रष्ट्राचारको राजनीतिले मुलुकलाई कुन अवस्थामा पुर्यायो भने । आज नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा साढे तीन वर्षमै सरकार बन्यो ।
आज यो कुरो स्थापित भएको छ, त्यो भनेको के हो भने, केपी शर्मा ओलीको सरकारले साढे तीन वर्ष सम्म न मुलुकलाई स्थिरता दिन सक्यो, न मुलुकलाई समृद्धि दिन सक्यो, न मुलुकलाई शान्ति दिन सक्यो, न मुलुकलाई आर्थिक उन्नती दिन सक्यो, न मुलुकलाई विकास दिन सक्यो त्यो कुरा आज स्थापित भएको छ ।
त्यसकारण अब यो संविधानको रक्षा गर्नका लागि, संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्नका लागि, यो व्यवस्थालाई सुदृढ गर्नका लागि एउटा बलियो कांग्रेसको आवश्यकता छ । तसर्थ देशमा कांग्रेसको विकल्प छैन् । यो स्थानीय निर्वाचनमा वडा देखि पालिका सम्मका सबै पदहरुमा कांग्रेसका उम्मेदवारहरु जिताउनुहोस् । कांग्रेसको चुनाव चिन्ह रुखमा मतदान गरे देशमा स्थितरता सहित लोकतन्त्र बलियो हुन्छ ।